Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nlele ekwentị na-abịaghachi na ụgbọ elu Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'oge nbanye ekwentị, enwere ike inyocha koodu QR nke asambodo akwụkwọ wee si otú a nyochaa ngwa ngwa na adaba.
Lufthansa na-alaghachi nbanye ekwentị na ụgbọ elu sitere na mpaghara ndị na-adịghị ize ndụ.
Ndị njem ọzọ nwere ike nyefee kaadị mbata ha ozugbo na ekwentị ha.
Site na ngafe dijitalụ, ọ nweghị akwụkwọ ọzọ dị mkpa na tebụl nbanye.
Lufthansa na-enye ndị njem ya usoro nbanye ka adaba. Na ụgbọ elu 2000 kwa izu site na mpaghara ndị na-adịghị ize ndụ na mpaghara Schengen (nke dị ugbu a site na Spain, Italy ma ọ bụ Sweden, dịka ọmụmaatụ) na Germany, ndị njem nwere ike ọzọ nyefee ikike ịbanye na ekwentị ha ozugbo mgbe ị na-abanye.
Emere nke a site na nyocha akpaka na dijitalụ nke asambodo ịgba ọgwụ mgbochi EU, nke na-egosi nchedo ọgwụ mgbochi yana nsonaazụ COVID-19 sitere na ụlọ nyocha Centogene.
N'oge nbanye ekwentị, enwere ike inyocha koodu QR nke asambodo akwụkwọ wee si otú a nyochaa ngwa ngwa na adaba. Nke a pụtara na enwere ike ịnyefe nbanye dijitalụ yana ndenye akwụkwọ ọzọ na mbata nbanye na ọdụ ụgbọ elu adịkwaghị mkpa.
Mana otu a metụtara ọtụtụ ndị ọzọ Lufthansa ụgbọ elu: onye ọ bụla na -eche na ha enweghị asambodo ziri ezi maka njem ahụ nwere ike lelee ya site na a Ụlọ ọrụ Lufthansa ruo awa 72 tupu ọpụpụ. Ndị a nwere ike bụrụ ihe akaebe maka ule, ọrịa COVID-19 lanarịrị na ịgba ọgwụ mgbochi. Enwekwara ike ịlele nkwenye nke ngwa ntinye dijitalụ n'ụzọ a. Ekele maka ngwọta dijitalụ ọhụrụ, nlele ugbu a nwere obere akpaka ya mere ọ na -adịkwa ngwa ngwa, yana na Service Center.
Ụgbọ elu ahụ na -adụ ndị ọbịa ya ọdụ na na mgbakwunye na ihe akaebe dijitalụ, a ka ga -ebu asambodo izizi ebipụtara na njem ahụ ruo mgbe amara ọzọ.